Inkinga yokushisa i-dacha noma isakhiwo sefulethini lapho kwenzeka ukuthi lo mgwaqo ude kude namagesi kagesi kungaba yinkinga yangempela, ngoba ugesi esikhathini sethu siyabiza. Indlela enhle kakhulu yokuphuma kule simo ukuthengwa komlilo oshisayo noma isithando somlilo. Kuyafaneleka ukuthi imishini enjalo ingabizi, ibhekene nomnotho osebenzayo. Izindawo ezithandwa kakhulu phakathi kwabanikazi bezizinda ezikude zasemaphandleni ziyizikhumba zendlu ehlala isikhathi eside.
Imishini enjalo isebenza kancane kancane kunomlilo oqinile ojwayelekile "burzhujki" nethi "Dutch". Izinkuni esithandweni somlilo ezinjalo asishintshi, kodwa ziphosa, okuqinisekisa ukushisa okude futhi okwanele kwomoya ekamelweni. Umusi kulolu hlobo lokwakha ungena ekamelweni lokulandelela, lapho lishisa ngokuphelele. Lokhu kukhulisa kakhulu ukusebenza kwesithando somlilo. Ngakho-ke, uma usebenzisa le mishini, ungagcina okuningi kuphethiloli. Ibhukimakhi yokugcina ngokuvamile ayikho izikhathi ezingaphezu kwezingubili ngosuku.
Amafutha okushisa omlilo oqhubekayo ngokuvamile asebenza ngendlela yokuhambisa umoya. Lokhu kukuvumela ukuthi ukwandise umkhiqizo. Umoya obandayo ovela phansi ekamelweni ufaka izingono noma ukuvuleka emzimbeni wesithando somlilo. Ukushisa kwenzeka uma kushukunyiswa phakathi kwesikhumba namadonga esithando somlilo. Umoya oshisayo uphuma emaceleni noma ukuvula okuvela phezulu, ukushisa igumbi.
Izitsha zokushisa zisetshenziselwa ukushisa isikhathi eside phezu kwezinkuni, sawdust, chips, amalahle, peat ngisho nemfucuza yasendlini. Umusi ophakathi kwabo awunjengobuhlungu njengamamodeli avamile.
Ngaphezu komnotho, lolu hlobo lwesithando somlilo lunenzuzo elandelayo:
Kulula ukugcina nokusebenza.
Ukusebenza okuningi. Ungasebenzisa izitofu zendlu enyakazayo hhayi kuphela ukushisa amakamelo akho, kodwa nokupheka ukudla. Njengoba abakhiqizi abaningi beqaphela ngokucophelela ukuklanywa kwemishini enjalo, kungase kube kwezinye izimo ngisho nokuba umhlobiso wesitayela.
Amamodeli anesifunda samanzi
Izitsha zendlu ende ezishisayo ezikhuni zisebenza kahle ngaphandle kokuxhuma amapayipi nama-radiators. Nokho, ekamelweni elikhulu, ukusetshenziswa okungeziwe kwemigwaqo kungaba yindlela engcono kakhulu. Ezinhlobonhlobo ezilula kunazo zonke ezihamba ngamanzi emshinini, isilinda esindiwe esinezibhamu ezimbili ezifakiwe, lapho ukuhambisa nokubuyisela amapayipi wesistimu yokushisa kuxhunyiwe. Ipompo yokujikeleza iphoyisa ukuhanjiswa kokushisa. I-tank yokwandisa isetshenziselwa ukuqapha ukucindezela komphakathi wokushisa. Ama-radiator okushisa angasetshenziswa noma yikuphi.
Ngokuvamile, izitofu eziphila isikhathi eside ezinezifunda zamanzi zifakwe njengenye indawo yokushisa ngaphandle kwegesi noma i-fuel fuel boiler.
Isithando somlilo omude: senza ngezandla zethu
Okulandelayo, cabangela ukuthi ungenza kanjani umklamo olula walolu hlobo kusuka ezintweni ezifakiwe. Kulaba bantu isitofu esinjalo sabizwa ngokuthi "bobafone". Iqukethe ama-node alandelayo:
Ukwakhiwa kwegumbi lokushisa
Lesi yisici esibaluleke kakhulu nesibalulekile esithandweni somlilo. Ungayenza kusukela emgqonyeni wensimbi ojwayelekile noma emgqonyeni wempango ngama-200 amalitha. Ngalesi sikhundla, udinga ukukhipha isembozo futhi usike ukuvula ngaphansi kombhobho we-piston-blower. Isikhumba kufanele sivaliwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Uma umoya uqina kakhulu ngesitofu, isikhathi eside siyoshisa izinkuni.
Izitsha zendlu ende ezishisayo ezikhuni zisebenza ngenani elincane le-oxygen. Lokhu okulandelayo "ku-bubafonuyu" kudliwe ngendwangu yomlotha, engekho ngezansi, njengamanye amamodeli avamile, kodwa kusuka phezulu. Ukuze wenze i-piston udinga ipayipi enobubanzi obuyi-100 mm. Kuzodingeka futhi ukuba nensimbi yensimbi yobubanzi obukhulu kakhulu kunombhobho onomgodi we-100 mm phakathi nendawo. Kuwo wesiphambano ukusuka maphakathi kuya emaphethelweni amakona amane ngamashalofu avulekile. Ngakho-ke, iziteshi zihlelwe, lapho umoya uzosakazwa kuwo wonke umthamo wesithando somlilo. Khona-ke i-blade ene "amacu" ihlanganiswe phansi kwephayiphu. Umphumela uwuyi-piston enkulu yomklamo okhethekile. Kumele ifakwe emgodini kulesi sikhwama semigodi. Phezu kwe-pipe-scoop efakwe i-valve yokulawula ithrekhi.
Ukukhishwa kwegesi kweflue
Ukushisa izitofu Ukushisa ukushisa isikhathi eside kukhulu kakhulu. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwedivayisi yokususwa kwegesi kuzo kuyadingeka. I-chimney ifakwe eceleni ohlangothini lomgqomo ngokusebenzisa ipayipi legatsha. Emgwaqweni ususwe noma ungena emgodini odongeni, noma ngodonga nophahla.
Imfucumfucu yokushisa eside ngezinkuni: ukubuyekezwa
Imibono yabanikazi bamazwe baseRussia ngalezi ziko iye yaqala ukuphikisana kakhulu. Ezinye zalezi zixhobo zijabule kakhulu. Abanye bakhononda ngesidingo sokuhlanzwa ngokujwayelekile kwe-chimney. Inkinga efanayo ingavela ngempela. Kodwa uma kwenzeka ukufakwa okungalungile nokusetshenziswa kwesithando somlilo. Uma ufaka ihhavini, kufanele kubhekiswe ukunakwa okukhethekile emhlanganweni we-chimney. Kumele kwenziwe kahle ngokuya imiyalelo. Ukugqoka noma ukushisa isitofu salesi siklamo kuzoba kuphela uma usebenzisa uphethiloli olungafanelekile. Yini engasetshenziswa iboniswa ngumenzi.
Ezimfanelo ezinhle, abathengi ngokuyinhloko, baqaphele ukusebenza kahle kanye nenzuzo yalesi sakhiwo. Noma kunjalo, kunconywa ukuthi usebenzise kuphela ukushisa izindlu ezincane noma njengomthombo owodwa wokushisa. Ezindlini ezinkulu, kunconywa ukuba ufake imishini yokushisa ejwayelekile.
Ukufakwa kwezimodeli zezimboni
Ukufakwa kwezinto ezinjalo okwenziwe ngomumo njengamashiya endlu enomlilo oshisayo kuyinkqubo elula ngisho nokuhlanganisa isakhiwo kusuka ekuqaleni. Okuwukuphela kobunzima ukuthi lezi zithombe kufanele zibekwe eduze nodonga, ngoba ipayipi legatsha le-chimney likhona ngemva kwabo. Endaweni yokhuni, lokhu kungaba yingozi. Ngakho-ke, udonga kufanele lubekwe kuqala ngezinto zokushisa. Imilenze yezinhlobo zezimboni ngokuvamile iguquguqukayo, okuqhubekayo kuthuthukisa ukufakwa.
Isikhumba sezitofu eziphelile ngokuvamile kuvamise insimbi enobuthi eyodwa. Kodwa-ke, ukuze uthole imali eyengeziwe, umkhiqizi unikeza umthengi ithuba lokuthenga umnyango obala owenziwe ngilazi ekhuni yokushisa. Lesi sici sithuthukisa izimfanelo zobuhle zesakhiwo. Phakathi kwezinye izinto, esikhathini sethu sikhiqizwa izitofu ezinhle, umlilo wokushisa eside.
Ngokulandelayo ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo zezinhlobo zalolu hlobo ezidumile emakethe yanamuhla yokushisa imishini. Isixazululo esihle kakhulu kungaba, isibonelo, ukuthenga brand Lavoro. Lezi zithombe zikhiqizwa yinkampani yasekhaya ehlinzeka ngemishini eminingi yomlilo emakethe. Lezi zinyunithi ezithengisa kakhulu, zihlanganisa futhi zikwazi ukusebenza kwelinye ithebhu kuze kube amahora angu-8. Enye inzuzo yi-100% yokulondoloza. Ukufinyelela ngokuphelele kunoma iyiphi i-node, uma kunesidingo, ngeke kube nzima. Ukusebenza kwalezi zitshalo kungu-85%.
Okuthandwa kakhulu phakathi kwabanikazi bezindlu zezwe kanye namagareji yizibonelo ze brand "Ermak". Ngenxa yamatayipi wokuthutha, lezi zitsha zihlinzeka ngokufudumala okusheshayo ekamelweni. Ukusebenza kwabo kuhle cishe ngo-80%.
Izitshalo zokutshisa eside zimi, njengoba kushiwo kakade ngokungabizi kahle. Intengo yabo ixhomeke ekusebenzeni, brand kanye nokuyinkimbinkimbi komklamo. Ezitolo ze-intanethi ungathenga njengamamodeli amancane alula ama-ruble angu-7-10, kanye nemiklamo emikhulu eyinkimbinkimbi esebenzayo kakhulu ngama-ruble angu-20 000.
Njengoba ubona, amafomu wendlu yokushisa eside - imishini ilula kakhulu futhi engabizi. Yiqiniso, ukushisa i-cottage enkulu kungcono ukusebenzisa i-boiler egcwele. Nokho, ukushisa indlu encane yezwe ekwindla noma entwasahlobo, ukhetho olungcono alitholakali.